Lalàna & Zo: Vavolombelon’i Jehovah any Kirghizistan | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Yorobà
Topy Maso An’i Kirghizistan
Efa nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Kirghizistan nanomboka tamin’ny 1956. Voasoratra ara-dalàna izy ireo tamin’ny 1998. Imbetsaka izy ireo no nosakantsakanana rehefa nitory sy nivory. Izao anefa efa mba miaro ny zon’izy ireo ny fanjakana.
Nilaza ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao Amin’ny Fitsarana Tampony, tamin’ny Novambra 2013, fa tokony hovan’ny fitondrana any Kirghizistan ny lalàna momba ny fanompoana sivily, fa tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana. Nanaraka ny tenin’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ireo fitsarana any Kirghizistan. Tsy ampangaina eny amin’ny fitsarana intsony àry ireo lehilahy Vavolombelona tsy manaiky hanao miaramila, nanomboka teo amim-piandohan’ny 2014. Novan’i Kirghizistan koa ny lalàna mifandray amin’ny raharaha miaramila, tamin’ny 29 Jona 2015. Tsy fehezin’ny miaramila intsony àry ireo tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany, rehefa manao fanompoana sivily.
Nanome rariny ny Vavolombelon’i Jehovah ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao Amin’ny Fitsarana Tampony, tamin’ny Septambra 2014. Niaro ny fahalalahana ara-pivavahana koa io Filan-kevitra io, rehefa nilaza fa tsy mifanaraka amin’ny lalàm-panorenana ny ampahany amin’ny lalàna 2008 momba ny fivavahana. Tsy noraharahain’ny Komitim-panjakana Momba ny Raharaha Ara-pivavahana anefa ny tenin’ilay Fitsarana. Tsy neken’izy ireo koa ny hanoratra ho ara-dalàna ny fikambanan’ny Vavolombelona any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan. Nisy àry manam-pahefana nilaza hoe tsy ara-dalàna ny asan’ny Vavolombelona. Rehefa manazava ny tena marina amin’ny manam-pahefana anefa ny Vavolombelona, dia afaka mivory izy ireo ary tsy misy manakantsakana rehefa miresaka ny finoany amin’ny mpiara-monina aminy. Manantena ny Vavolombelona fa hanaraka tanteraka ny tenin’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ny fitondrana, ka hanoratra ho ara-dalàna ny fikambanan’izy ireo, any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan.